Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo duqeyn lagu laayey | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo duqeyn lagu laayey
Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo duqeyn lagu laayey
10-ka tirsan maleeshiyada xagjirka ah ee Al-shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal ayaa lagu dilay duqayn xagga cirka ah oo maanta ka dhacay deegaanka Dhaay-unboow iyo deegaano kale oo hoos taga tuulada Dhasheeg-waamo oo 60-km uga beegan dhinaca woqooyi magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee Jubbaland.
Horjoogihii maleeshiyada u qaabilsanaa Dhaay-unboow oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Bashiir ayaa ka mid ah dadka duqaytaasi lagu dilay, waxaana dhaawac soo gaaray horjoogihii maleeshiyada u qaabilsanaa deegaanka Maroodi-gubow, oo magaciisa lagu soo koobay Xirow, kaas oo ay ula carareen degmada Jilib oo ka tirsan Jubada dhexe.
Duqayntaas oo ay fuliyeen ciidamo Maraykan ah oo kaashanaya Komandoosta Danab ayaa lagu burburiyey fariisimo ay maleeshiyadu aagaasi ku lahayd iyo gaadiid ay isticmaalayeen, waxaana ku dhaawacmay 2-kale oo maleeshiyada ka tirsanaa, sida uu SONNA u soo wariyey Shirwac Cumar oo ka tirsan Idaacadda ciidamada qalabka sida.
Ciidanka Danab ayaa todobaadyadii ugu dambeeyey xoojiyey hawlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo maleeshiyada Al-shabaab, waxaana hawlgalladan ay wiiqeen awoodda kooxda ka dib markii todobaadkan laga qabsaday deegaanka Janaay Cabdalla oo ah goob istiraatiiji ah, una ahayd bar ay dhaqaalo ka soo galaan.
Maqaal horeSawirro Miinooyin laga soo saaray jidka isku xira Balcad iyo Afgooye
Maqaal XigaMadaxweyne Farmaajo oo shir ku casuumay madaxda dowlad goboleedyada